Novel Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအတွက်ထုတ်ကုန်များ
ဖေါ်ပြချက်:ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာဖုံးကာကွယ်မှု, Wuhan ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာဖုံး, တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျက်နှာဖုံး,,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Anti-Virus အတွက်ထုတ်ကုန်များ
Anti-Virus အတွက်ထုတ်ကုန်များ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာဖုံးကာကွယ်မှု, Wuhan ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာဖုံး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျက်နှာဖုံး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
KN95 မျက်နှာဖုံးမျက်နှာပြင်အရည်သည်မှုတ်မဟုတ်သော  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Infrared Thermal Imaging Camera  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အဆက်အသွယ်မရှိသောအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူမီတာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမျက်နှာဖုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်သည့်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘက်တီးရီးယားဗိုင်းရပ်စ်ပိုး islolation ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာခြုံငုံကိုက်ညီ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသစ်သော Coronavirus ကာကွယ်ရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်မှန်တပ်ကိုကာကွယ်ပါ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခါသုံး antibacterial ပိုးသန့်ဆေးမှုန်ရေမွှား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်သတ္တုရှာဖွေစက်မှတဆင့်လမ်းလျှောက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Novel Corona Virus ကိုကာကွယ်ရန်မျက်နှာဖုံး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 3.78 / Piece/Pieces
ထုပ်ပိုး: စက္ကူသေတ္တာ, စက္ကူပုံး
Supply နိုင်ခြင်း: 1500000pcs per month
N95 Corona ဗိုင်းရပ်စ်အတွက် KN95 Face Mask ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: Product
Supply နိုင်ခြင်း: 30000 pieces per month
အနီအောက်ရောင်ခြည်အပူပုံရိပ် (မော်ဒယ် # ITI-980Y) ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် ITI-980Y အနီအောက်ရောင်ခြည်ကင်မရာထုတ်ကုန်သည် 2019-nCoV Wuhan coronavirus ရောဂါအသစ်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တိုင်းတာမှုတိကျမှုသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အကွာအဝေး၏ ၃၅ မှ ၄၂...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 78 - 98 / Bag/Bags
Supply နိုင်ခြင်း: 6000pcs/month
အဆက်အသွယ်မရှိသောအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူမီတာ အသွင်အပြင်: ၁.၂ စက္ကန့်တိုင်းတာခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်အချက်အလက်၏ 2,32 အစုံ; 3.Large မျက်နှာပြင်သုံးအရောင်နောက်ခံအလင်း; 4, Offset, Fahrenheit ချိန်ညှိသည် 5. လုံခြုံစိတ်ချရပြီးလက်တွေ့ကျသော၊ 6....
Supply နိုင်ခြင်း: 5000000pcs per month
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမျက်နှာဖုံး (Model # MSM-01) ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ Face mask 3Ply Coronavirus တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာခွဲစိတ်ကုသမှုမျက်နှာဖုံးသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆေးရုံအတွက်အရည်အသွေးကောင်းသည် Product Name Disposable medical surgical mask...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 120000 / Bag/Bags
Supply နိုင်ခြင်း: 2000 pieces per month
ဖယ်မျက်နှာမျက်နှာဖုံးထုတ်လုပ်မှုစက် ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်အဓိကအားဖြင့်ကွိုင်များအစာကျွေးခြင်း၊ ခေါက်ခြင်းနှင့်ဖိခြင်း၊ နှာခေါင်းရွတ်ရွတ်အစာကျွေးခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးဖြတ်ခြင်း၊...
ဘက်တီးရီးယားဗိုင်းရပ်စ်ပိုး islolation ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာခြုံငုံကိုက်ညီ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 29 / Bag/Bags
Supply နိုင်ခြင်း: 50000 pcs/day
အကာအကွယ်ဝတ်စုံကိုရေစိုခံဘေးကင်းလုံခြုံရေး coverall ။ အဓိကပစ္စည်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာ PP မဟုတ်သောအထည် (၃၇ gsm) + PE film (28gsm) သို့မဟုတ်ဖောက်သည်များ၏တောင်းဆိုချက်အရ zips, Velcro, အပြာရောင်အစင်းများ၊ elastics ETC စသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။...
အသစ်သော Coronavirus ကာကွယ်ရေးဆေးဘက်ဆိုင်ရာမျက်မှန်တပ်ကိုကာကွယ်ပါ
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 12.5 / Bag/Bags
Supply နိုင်ခြင်း: 50000 pcs /day
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ Size 15.5*9*6.5CM
တစ်ခါသုံး antibacterial ပိုးသန့်ဆေးမှုန်ရေမွှား
Supply နိုင်ခြင်း: 50000 bottles /day
ထုတ်ကုန်အမည်: တစ်ခါသုံး antibacterial ပိုးသန့်ဆေးမှုန်ရေမွှား အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: 100ml သက်တမ်း - ၂၄ လ အရက်ပါဝင်မှု - ၇၅% အသုံးပြုခြင်း - အရေပြားနှင့်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဘက်တီးရီးယားများကိုသတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အသုံးပြုရန်ညွှန်ကြားချက် -...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1380 / Piece/Pieces
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေးစက် ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက် အပူချိန်တိုင်းတာခြင်း Post disinfection machine တွင်တိကျမှုမြင့်မားသောအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာကိုအသုံးပြုသည်။ မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်မြင့်မားသော resolution...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 860 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 1000Sets/Month,7days
ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်လမ်းလျှောက် - မှတဆင့်သတ္တု detector (မော်ဒယ် # BT-01) channel ကိုအနီအောက်ရောင်ခြည်အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းတံခါးသည်တိကျပြီးအဆင်ပြေသောအပူချိန်တိုင်းတာခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ တံခါးရှေ့မှာရပ်နေစဉ်သင်၏နဖူးကိုအပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနေရာမှ ၁-၂...
Novel Corona Virus ကိုကာကွယ်ရန်မျက်နှာဖုံး
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 0.5 / Piece/Pieces
အသစ် Novel Corona Virus အတွက်မျက်နှာဖုံး လုပ်ဆောင်ချက်များ
တရုတ်နိုင်ငံ Anti-Virus အတွက်ထုတ်ကုန်များ ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် Anti-Virus အတွက်ထုတ်ကုန်များ အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာဖုံးကာကွယ်မှု, Wuhan ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာဖုံး, တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျက်နှာဖုံး,,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် Anti-Virus အတွက်ထုတ်ကုန်များ ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ Anti-Virus အတွက်ထုတ်ကုန်များ အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာဖုံးကာကွယ်မှု, Wuhan ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာဖုံး, တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျက်နှာဖုံး,,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ Anti-Virus အတွက်ထုတ်ကုန်များ အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာဖုံးကာကွယ်မှု Wuhan ဗိုင်းရပ်စ်မျက်နှာဖုံး တုပ်ကွေးဗိုင်းရပ်စ်ပိုးမျက်နှာဖုံး